May 22, 2012 - Written by Muqdisho:-Ka dib dagaal maanta ka dhacay duleedka Dayniile ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa guul ka sheegtay Ciidanka AMISOM oo taageeraya ciidanka DFKM walow arrinkaas ay beeniyeen ciidanka ururka Al-shabaab oo sheegay in duulaankii ay soo qaadeen ciidanka AMISOM maanta ay ku jabeen.
Ku xigeenka Wakiilka Midow ga Afrika ee Ciidanka AMISOM Wafulu Wamuyiyi oo la hadlay saxaafada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dagaalka saaka ay qaadeen ciidanka AMISOM uu ahaa mid qorsahaysan oo loogu talagalay buu yiri in dhibaato aysan ka soo gaarin dadka faraha badan ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho waa sida uu hadlaka u dhigaye.
Ku xigeenka Waikiilka Midowga Afrika ee Ciidanka AMISOM Wafulu Wamuyiyi oo garabkiisa uu taagnaa Taliyaha ciidanka AMISOM ee magaalada Muqdisho ayaa ku celceliyey in dagaalka saaka uu ahaa mid u dhacay siddii loo qorsheeyey isagoo sheegtay in dadka shacabka ah ay ugu baaqeen in ay guryahooda ay ku sugnaadaan. Taliyaha ciidanka AMISOM Anduru Guti ayaa ku faanay in ay dileen ilaa 4 askari uu ka tirsan Al-shabaab hub kale duwan ay ka qabsadeen ciidanka Al-shabaab hubkaas oo uu ku sheegay ilaa 2 gaadiidka hubka uu saran yahay ah.
Sarkaal u hadalay dhinac ururka Al-shabaab ayaa guusha ciidanka AMISOM ku sheegay mid been abuur ah waxaana uu xusay in khasaaro xooggan ay gaariiyeen ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM ayna ku fashilmeen markii 3aad in ay wax guul ah ay ka gaaraan weerar ay ku soo qaadeen degmada Dayniile.